IPodPod yiprojekthi eqalekisiweyo yeApple esebenzayo iminyaka emininzi | Ndisuka mac
IPodPod yiprojekhthi eqalekisiweyo yeApple endisebenza kuyo iminyaka emininzi
Kwakhona nanjengoko iApple isiqhele ukukhutshwa kutshanje, ngaphezulu kweveki edlulileyo ukulibaziseka kwimveliso yeKhayaPod kwabhengezwa, Ayisayi kuba yinto enqwenelekayo ngale Krisimesi, Into ngokuqinisekileyo engazukuyenza kakuhle kuTim Cook.
Kodwa kubonakala ngathi ayizizo zodwa iindaba ezinxulumene nesithethi esi-smart sika-Apple esivelileyo kwezi ntsuku, ukusukela ngokutsho kweBloomberg, inkqubo yokuyilwa kweKhayaPod kwasekuqaleni Ibe yenye yezona zinto zinzima kwimemori yenkampaniIprojekthi eyarhoxiswayo yaze yaqhubeka amatyeli aliqela, de yagqitywa ngeyeSilimela ephelileyo ngokwesakhelo seWWDC.
Olunye lweyona datha inomdla, ukusuka kuphuhliso lwale projekthi, kukuba kuyilo lwayo lokuqala, iPod yasekhaya yayiyimitha enye ukuphakama kunye nenani elikhulu lezithethi, uyilo olwaluya kugxekwa ngokubanzi ukuba lwalukubonile ukukhanya ngaxa lithile. Le projekthi ibiphethe iinjineli zeaudiyo zeMac, iinjineli ezazifuna ukuba isandi sibe sesona sihamba phambili kwintengiso kwaye ezinye zoyilo ezivela kwinkampani iJBL, uBose kunye noHarman Kardon zalungiswa.
NgokukaBloomberg, ezinye iinjineli zatyholwa ngokuvuza ulwazi kwiAmazon, owasungula iAmazon Echo, isithethi esilawulwa yinkampani nge-Alexa, kwiminyaka emibini emva kokuba uApple eqale ukusebenza kwiKhayaPod. U-Apple wazinikezela ukuba aqhubeke nokufakwa kwiprojekthi ebuye yabuya kade kakhulu kuba imarike yangoku ilawulwa ikakhulu zizixhobo zeAmazon ezilawulwa yi-Alexa, ke inkampani inyanzelwe ukuba itshintshe ukusebenza kokugqibela kwesi sixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IPodPod yiprojekhthi eqalekisiweyo yeApple endisebenza kuyo iminyaka emininzi
Lawula uhlaziyo kwiMacOS kunye neeapps ezivela kwiVenkile ye App
Ityala elikhuselekileyo kwiMacBook yakho